Dowladda Spain oo ka hadashay shilkii xalay sida xun loogu dhaawacay taageere Juventus ah! – Gool FM
Dowladda Spain oo ka hadashay shilkii xalay sida xun loogu dhaawacay taageere Juventus ah!
Raage November 22, 2016
(Sevilla) 22 Nof 2016 – Booliiska ayaa xaqiijiyay in taageerayaasha Juventus “ay si deggan u cashaynayeen” markii xalay lagu weeraray meel baar ah.
Horin ka kooban 40 ilaa 50 qof oo ku qaylinaya halku dhegyo lagu taageero Sevilla ayaa weerarka gaystay iyagoo dhaawac halis ah oo dhinaca iyo lugta ah u gaystey taageero Juventus ah.
Wakiil u hadashay dowladda oo la yiraahdo Felisa Panadero ayaa xaqiijiyay in taageerayaasha Juventini oo gaarayey 10-12 “ay si deggan u cashaynayeen” meel baar ah saacaddu markii ay ahayd 23.00 habeenkii xalay ahaa iyagoo ku sugnaa aagga Reyes Catolicos waxayba nimanka soo weerartanay oo gaarayay 40-50 ay xirnaayeen maasgarooyin.
Baaritaanka ilaa haatan la qaaday ayaa lagu ogaadey in taageerayaasha Talyaanigu ay si nabadeed u dhaqmeen iyagoo meesha iskaga tegey markii kuraasi iyo miisas lagu soo tuuryeeyay.
Booliiska ayaa ku yimid muddo 3 daqiiqo gudohood ah, balse waxay ahayd jeer ay horraanba meesha ka carareen eedaysanayaashu, waxayse ahayd mar ay dhali jabsan geliyeen mid ka mid ahaa taageerayaasha Juve.
Maamulka magaalada Sevilla iyo dowladda Spain ayaa sheegay inaysan u cuntamaynin dhaqamada noocan ahi inay ka dhacaan magaalada nabadeed ee Sevilla iyadoo amaanka sare loo qaaday kulanka goor dhowe dhexmari doona kooxaha Sevilla vs Juve.
“Waxay ahayd dhacdo lama filaan ah, balse waxay u muuqdeen dad isa soo diyaariyay maaddaama ay ku yimaadeen 40-5o iyaoo sita dhagaxyo, bulukeeti, ulo iyo hub kale.” ayay tiri Felisa Panadero.
DAAWO SAWIRRADA: Kullankii galabta Dekedda ay ka badisay Bariga Dhexe
TOOS u daawo: FC Sevilla vs Juventus, Monaco vs Tottenham - LIVE (Shaxda sugan)